जोर्डनसँग नेपाललाई बदला लिने अवसर, के नेपालको जित संम्भव छ ? – Hamrosarokar
जोर्डनसँग नेपाललाई बदला लिने अवसर, के नेपालको जित संम्भव छ ?
By Hamrosarokar	 On २४ जेष्ठ २०७८, सोमबार ११:१३
काठमाडौं,२४ जेठ–फिफा विश्वकप सन् २०२२ तथा एसियन कप सन् २०२३ अन्तर्गत आज नेपाल र बलियो टिम जोर्डन भिड्दै छन् । खेल राति पौने १० बजे कुवेतको कुवेत सिटीमा रहेको जाबेर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा हुनेछ । आज पनि उच्च मनोबलका साथ मैदानमा उत्रने तयारी भएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताईरीले बताएका छन्।
नेपालले जोर्डनविरुद्ध हालसम्म तीन पटक खेलेको छ । तर, नेपालको नतिजा सुखद छैन । नेपालले जोर्डनविरुद्ध दुई खेल गुमाएको छ । एक खेल भने बराबरी खेलेको छ । नेपाललाई जोर्डनले २०११ को जुलाई २३ मा विश्वकप छनौटकै खेलमा ९-० ले पराजित गरेको थियो भने त्यसको एक सातापछि काठमाडौँमा जुलाई २८ मा नेपालले जोर्डनलाई १-१ गोलको बराबरीमा रोकेको थियो। नेपालले यसै विश्‍वकप छनौटको अघिल्लो खेलमा ३-० को हार व्यहोरेको थियो ।
यसअघि गएको बिहीबार भएको खेलमा नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई २-० ले हराएको थियो । उक्त खेलमा अन्जन विष्‍ट र नवयुग श्रेष्‍ठले गोल गरेका थिए । नेपालले विश्वकप छनोटको तेस्रो चरणमा पुग्ने मौका गुमाईसकेको छ । तर नेपाललाई बाँकी खेलमा जित निकाल्दै एसियन कप छनोटको तेस्रो चरणमा स्थान बनाउने अवसर रहेको छ ।
यस्तो छ २३ सदस्यीय नेपाली टोलीः
१६६औं विश्व रक्तदाता दिवसको अवसर पारेर धरमपुरमा…
ओलीले दाहाललाई भनेः 'महाधिवेशनतर्फ जाऊँ, अहिले…
राजनीतिको कोभिडले नेकपालाई निल्योः मुख्यमन्त्री शेरधन राई